सरकारसँग वार्ता गर्न विप्लव काठमाडौं प्रवेश ! « रिपोर्टर्स नेपाल
सरकारसँग वार्ता गर्न विप्लव काठमाडौं प्रवेश !
काठमाडौं, ६ कात्तिक । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सरकारसँग वार्ता गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका छन् । सरकारले यसअघि पटक पटक वार्ताको लागि विप्लवसँग पत्राचार र आग्रह गरेको थियो । तर, विप्लव समूह वार्ताको लागि तयार नै भएन । पछिल्लो समय विप्लव समूहविरुद्ध सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । एकपछि अर्को गरेर प्रभावशाली नेताहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि विप्वल सरकारसँग वार्ताको लागि तयार भएको समाचार आईरहेका छन् ।
चितवन, २८ असार :सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रकोपविरुद्धको सङ्घर्ष